Maalinta: Meey 5, 2020
Majaure darooyinka sabab u ah fayraska Corona, joojinta qandaraasyada ama dib u dhaca bixinta ayaa laga wada hadlay. Si kastaba ha noqotee, bixinta dammaanadda ee buundooyinka Eurasia Tunnel, Osmangazi iyo Yavuz Sultan Selim ayaa gabi ahaanba la sameeyay. Laga soo bilaabo SÖZCÜ ilaa wararka Yusuf Demir [More ...]
Isagoo xasuusinaya inay jiri karaan khasaaro shaqeynaya xitaa haddii uusan jirin cudur daba dheeraaday oo ay wehliyaan dadka ka weyn 65 jir, Khabiirka Cudurada Gudaha Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, khasaarahaas soo gaadhay da'da ayaa qofka u horseeda [More ...]
Gawaaridayadu waxay ku sugayaan baarkinka maalmahan marka ay muhiim tahay inayan ka bixin guriga haddii aysan qasab ahayn cudurka faafa ee COVID-19. Nabad gelyo, si loogu diyaar garoobo maalmaha aan dib u bilaabi doonno oo aan sugno taayirada baabuurta la dhigto [More ...]
Professor Dr. Ahmet Akçay wuxuu hadalkiisa ku sii watay sidan: “Bukaanka neefta ma joojinayaan ku buufinta dawooyinka ay ku jirto cortisone muddadan, kuwa hindhisada iyo qufaca xasaasiyadda manka waa inay isticmaalaan antihistamines-ka ayna ka takhalusaan astaamahan. Had iyo jeer [More ...]
IATA waxay ku talineysaa isticmaalka Maskaarta Maskaxda ee Duulimaadyada
Ururka Caalamiga ah ee Duulista Hawada ee IATA, oo matalaya shirkadaha duullimaadyada caalamiga ah, ayaa ku taliyay in xiro maaskaro lagu qasbo duullimaadyada si looga hortago faafitaanka fayraska corona marka duulimaadyada dib loo bilaabo. David, lataliyaha caafimaadka ee Ururka Duulista Hawada Caalamiga [More ...]
Xijaabka Labaad Gaas
Ururka Shaqaaleeyeyaasha Saliida Gaaska Tamarta (EPGİS) wuxuu shaaca ka qaaday in 5 fuusis kurus ah loo sameeyay qiimaha litirka ee shidaalka. Tuulada maanta imaan doonta ayaa saameyn ku yeelan doonta qiimaha bamka. Markaa shidaalka laba maalmood gudahood [More ...]
Wasaaradda Beeraha iyo Dhirtu waxay ku dartay qaab cusub oo uu fayraska ka dillaacay tababbarka beeraha iyo barnaamijyada baahinta ee loogu talagalay beeralleyda, soosaarayaasha iyo tuulooyinka kaynta. “Kaymaha Beeraha, oo lagu dhisay falsafadda aqoonta masaafada, [More ...]
Laba hawlgal oo isku xigxig ah oo ay fuliyeen kooxo ka mid ah Wasaaradda Dhaqangelinta Kastamyada Ganacsi ee magaalada Istanbul, 3,5 kun oo 554 maaskaro caafimaad ah oo qiimahoodu yahay 170 milyan liras ayaa la qabtay. Tahriibinta Kastamka Diyaaradaha Magaalada Istanbul iyo [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Tiknolojiyadda Mustafa Varank ayaa sheegay in dhammaan warshadaha baabuurta ee carqaladeeya wax soo saarka ay sii wadi doonaan howlahooda bisha Maajo 11, “Waxaa jira horumarro muhiim ah oo ku saabsan wax soo saarka. Warshadaha baabuurta badankood waa [More ...]
Hawlaha abuurida ayaa lagu dhammeystirey wadada kale ee tareenka oo neefsanaya gaadiidkii ku tegi lahaa bartamaha magaalada oo ay wada dagayaan kooxaha Balıkesir Metropolitan Dowlada Hoose. Wadada Gar; sykamore, linden, geeso gogo 'geedo kedar ah, geedo marshmallow, privet, lilac [More ...]
Qeybtii ugu dambeysay waxay soo martay Wadada Boztepe
Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ah inay gaadiid ku sameyso Boztepe iyadoo dhererkeedu yahay 530 mitir oo raaxada magaalada ah. Wadada 7,2km ayaa loo isticmaalay in lagu gaaro Boztepe, taasoo soo dhaweyneysa kumanaan dalxiisayaal maxalli ah iyo ajaanib ah sanad walba. [More ...]
Basaska ay wataan Qalabka Baaskiilka ayaa laga bilaabay Antalya
Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay jabisay dhul cusub oo gaadiidka magaalada ah ee Antalya. Qalabka lagu raaco baaskiilka si loogu daro gaadiidka dadweynaha 25 bas oo taarik ah oo rasmi ah oo ay leedahay Dowlada Hoose iyo in kor loo qaado isticmaalka baaskiilka [More ...]
Gawaarida Laydhka ah waxaa Loo habeeyay Gaadiidka Naafada ah ee Istanbul
IMM waxay sii wadaysaa dadaalkeeda si ay u qiimeyso bandoowga saddexda maalmood ah ee lagu dhawaaqay iyo in si dhakhso leh loogu fuliyo mashaariicdeeda. Habboon oo ku habboon dadka naafada ah iyo waqti qaadashada iyo helitaanka naafada [More ...]
Lacagta la Bixinaayo Buundooyinka iyo Wadooyinka Waaweyn ee La Xaqiijiyay
Sözcü Azar Cigdem Toker wuxuu qoray inta lacag ee laga bixinayo nabadgelyada gobolka ilaa buundooyinka loo dammaanad qaaday inay gudbi doonaan. Toker wuxuu xusey in culeyska buundada sedexda bilood ah qiyaastii $ 93 milyan. Toker oo leh buundooyin [More ...]
Nolosha Shaqada ee Corona
Fayraska corona, ee ka dhacay Wuhan, Shiinaha oo adduunka saameyn ku yeeshay tan iyo bishii Disembar ee la soo dhaafay, wuxuu keenay taxaddarro badan oo la qaado. Dadku waxay qaadanayaan taxadarkooda shaqsiyadeed iyagoo la kordhinaya kiisaska [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Konya waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ah inay kor u qaaddo heerka wadooyinka xaafadaha ee degmooyinka ku xiran Magaalada Caasimadda kadib sharciga cusub ee Magaalaweynta. Duqa Magaaladda Konya ee Uğur İbrahim Altay oo leh Sharciga Magaalaga cusub [More ...]
117 Kun Oo Masool Ah Oo Loogu Qaybiyey Maalintii Maskoolka
Codsiga mas Masikiya ee Magaalada Izmir Magaalo Weynaha ayaa u fududaysay muwaadiniinta inay marinka maaskaro bilaash ah u helaan. Laga bilaabo Isniinta, Meey 19, 4 kun 117 maaskaro ayaa loo qaybiyay mascuulinistayaasha 330 dhibcood. Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir, 17 [More ...]
Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa sare u qaadday shaqadeeda laba xeebood oo bilaash ah oo ay qorsheyneyso inay ku dhammaystirto xilligan xagaaga. Belek Public Beach, Kadriye Public Beach iyo Promenade halkaasoo ay wasaaraddu ku dhameystirtay qorshayaasheeda [More ...]
Qoyska, Wasiirka Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra sumurud Selcuk, March 11, taariikhda ka mid ah xaaladaha coronavirus ugu horeysay lagu arkay dalka Turkiga, in muddada ilaa dhamaadka April ay 170 boqolkiiba wicitaanada hayay kordhay ALO 160 4.8 [More ...]
Wareegtada Wasaaradda Arimaha Gudaha Xukuntay Wareegtada Gudoomiyaasha ee Ku Saabsan Galitaanka Magaalada iyo Tallaabooyinka Ka bixida
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa wareegto u dirtay 81 Maamulayaasha Magaalada ee "Tallaabooyinka Gelitaanka / Ka bixitaanka Magaalada". Wareegtada, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Istanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, [More ...]
Xidhmada taageerada su'aasha ee bisha Maajo, oo ka kooban 1000 su'aalood, ayaa la daabacay si ay u taageerto habraaca diyaarinta ardayda ka qeeyb galaya imtixaanka bartamaha imtixaanka ee Nidaamka Kalaguurka Dugsiga Sare (LGS). Iyada oo xirmo taageero ah la sii daayay Abriil [More ...]
Sida loo sameeyo 2020 LGS Center Exam ..! Halkan Dhammaan Isbeddelada
Imtixaanka dhexe ee dhex mara Nidaamka Gudbitaanka Dugsiga Sare waxaa la qaban doonaa 20ka Juun 2020. Tallaabooyin badan ayaa jiri doona inta lagu jiro imtixaanka caafimaadka ardayda. Markii ugu horreysay ee sannadkan, ardayda waxay awood u yeelan doonaan inay si fudud u galaan dhismayaasha imtixaanka. [More ...]
ASELSAN iyo Bıçakcılar waxay kala saxiixdeen heshiis iskaashi ah oo lagu horumarinayo mashiinka sambabka wadnaha ee loo adeegsado qalliinka wadnaha ee furan ee waddanka oo dhan. Mashiinka sambabbada wadnuhu waa hawl wadnaha badan oo shaqeynaya iyo sambabbada sambabada ah ee qalliinka wadnaha ee furan. [More ...]